Guddoonka Golaha Shacabka oo soo bandhigay 4-Qodob oo xal u noqday buuq iyo doodii ka dhalatay arrimaha amniga | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Guddoonka Golaha Shacabka oo soo bandhigay 4-Qodob oo xal u noqday buuq...
Guddoonka Golaha Shacabka oo soo bandhigay 4-Qodob oo xal u noqday buuq iyo doodii ka dhalatay arrimaha amniga
Waxaa xal laga gaaray buuqii iyo doodii ka dhalatay kulankii Golaha Shacabka ee looga doodi lahaa arrimaha amniga kaas oo Xildhibaanada ay isku khilaafeen arrimo la xiriira inay Saxaafada banaanka ka joogto.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka iyo Xildhibaano kulan ku yeeshay Muqdisho ayaa xal looga gaaray buuqii ka dhashay in Warbaahinta laga mamnuuco kulamada Golaha Shacbaka,iyada oo la isku raacay in la ilaaliyo nidaamka u yaalla Golaha Shacabka.
Qodobo ayaa kasoo baxay kulankaas oo ka kooban dhowr qodob,iyada oo amaro la dul-dhigay Wariyeyaasha ka qeyb galaya Kulanka ugu soo horeeya ee Baarlamaanka Golaha Shacabka Soomaaliya.
Hoos Ka Akhriso Qodobo ka mid ah waxyaabihii kasoo baxay kulankii Maanta.
1: In kulanka ugu soo horeeya ee Golaha Shacabka la qabto Maalinta Sabtida ah ee soo socota,isla markaana xildhibaanada la xiriira dhinaca amniga laga dhageysto, iyada oo Wariyeyaasha ay goobjoog ka noqon doonaan.
2:-In Maalinta xigta ee Axada ah in laamaha Amniga ay baarlamaanka hortagaan waxna laga weeydiiyo arrimaha amniga,iyada oo Saxaafada ay banaanka ka joogto.
3: In Wariyeyaasha tagaya golaha Shacabka ay Soo xirtaan jaakado ay ka muuqato Warbaahinta ay ka socdaan calaamadahooda iyo magacyadooda.
4: In saxaafada la siiyo kaarar aqoonsi ah inta ay Golaha ku sugan yihiin,isla markaana ay ilaaliyaan shuruucda u yaalla Baarlamaanka dalka.
Go’aanadaas kasoo baxay Guddoonka Golaha Shacabka iyo Xildhibaanada shirka ku yeeshay Magalada muqdisho ayaa meesha ka saaraya murankii ka dhashay dhawaan kulankii looga hadli lahaa amniga ee Su’aalaha lagu weeydiin lahaa laamaha Amniga Soomaaliya.